UEFA oo raali-galin ka bixsay jaha-wareer ay ku abuurtay Jamaahiirta kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 21 Mar 2020. Xiriirka kubadda cagta Yurub ee loo yaqaano UEFA ayaa dhowaan jahwareer ku abuurtay Jamaahiirta ku taxan kubadda cagta kaddib markii ay soo saareen labo qoraal oo kala duwan bogga ay ku leeyihiin dhanka twitter-ka oo la xiriira magaca loogu yeero tartanka qarammada qaaradda Yurub ee dhowaan dib loo dhigay.
Bartamaha todobaadkii dhammaaday ayaa UEFA go’aan ku gaartay in hal sano dib loo dhigo koobkii qarammada Yurub sababo la xiriira caabuqa Coronavirus, kaasoo hadda la qorsheeyay inuu dhici doono xagaaga 2021-ka.
Laakiin nasiib wanaag UEFA ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in magaca tartanka qarammada Yurub aan laga badali doonin Euro 2020, isagoo xitaa loo badalay 2021-ka taasi oo falcelin badan taageerayasha kubada cagtu ka sameeyeen.
Markii ay UEFA aragtay falcelinta jahwareerka badan dhalisay oo uu abuuray qoraalkooda hore, waxay kaddib go’aan ku gaareen in ay raali galin ka bixiyaan, isla markaan ay badalaan go’aankii hore ee ay shaaciyeen.
Jude Bellingham oo kala doortay Manchester United iyo Liverpool… (Kooxdee ayuu doonayaa inuu ku biiro?)